लिभरपुलको साँघुरो जितमा सलाह नायक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
लिभरपुलको साँघुरो जितमा सलाह नायक
एजेन्सी । इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले साँघुरो जित निकालेको छ । शनिबार भएको खेलमा लिभरपुलले ब्राइटनलाई १–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
लिभरपुलले उसैको मैदानमा ब्राइटनलाई हराएको हो । लिभरपुलको जितमा मोहमद सलाहले पेनाल्टीमा निर्णायक गोल गरे । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको ५० औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टीमा गोल गर्दै लिभरपुललाई जित दिलाए ।
जितसंगै लिभरपुलले शीर्ष स्थानको अग्रता ७ अंकको बनाएको छ । लिभरपुलले २२ खेलबाट ५७ अंक जोडेको छ । दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीको ५० अंक छ । सिटीले एक खेल कम खेलेको छ । २६ अंकसहित ब्राइटन १३ औं स्थानमा छ ।
प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार नै लेष्टर सिटी साउथह्याम्पटनसंग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएको छ । बर्नलीले फुलहमलाई २–१ ले पराजित गर्दा वाट्फोर्टले क्रिष्टल प्यालेसलाई २१ ले नै हराएको छ । कार्डिफ सिटी र हडर्सफिल्डले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाडेका छन् ।